YEYINTNGE(CANADA): Friday, March 22
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တော့ မတွေ့ဘူး။ နောက်တစ်ခုက ညနေဆိုလို့ရှိရင် မွတ်ဆလင်အိမ်တွေပေါ့- မွတ်ဆလင်အိမ်တွေက လူမရှိတော့ဘူး။ အဲဒီအိမ်တွေက ဖောက်တာတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ခင်ဗျားတို့ လုံခြုံရေး ချပေးပါ-လို့ ပြောခဲ့တယ်။ သူက ချပေးပါမယ်လို့တော့ ဝန်ခံတာပဲ။ အဲလို ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲက အခုနတုန်းက ပြောတာတွေ အကုန်ဖြစ်တယ်၊ မီးရှို့တာတွေ၊ အဖောက်ခံရတာတွေ၊ လက်လွတ်စပယ် အသတ်ခံရတာတွေက အဲဒီလို ရှိတယ်။ အစိုးရ version ကတော့ Everything is enough control. ပေါ့- အားလုံး ထိန်းချုပ်လို့ရပြီလို့ ယူဆထားတာ။ အန်ကယ်လ်တို့က မထင်ဘူး။”
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/22/20130အကြံပြုခြင်း
ယူတူးတွင်-RSO-အဖွဲ့ က မြန်မာအစိုးရအား စစ်ကြေညာ
စင်စစ်အားဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်လာတိုင်း သွေးထွက်သံယိုမှုများ
ဖြစ်ပေါ်ကြသည် ။ နေအိမ်ဥပစာများ မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေ ဖြစ်လာကြသည် ။
လူအသေအပျောက်များ ရှိလာကြသည် ။ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ချိန်အတွင်း
နယ်မြေခံလုံခြုံရေးများ ၊ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများက ငြိမ်ဝပ်ပိပြားစေရန်အတွက်
ချက်ချင်း မထိမ်းသိမ်း မဆောင်ရွက်နိုင်သောအခါ စောဒကတက်ပြီး အပြစ်တင်ကြသည်
။ ဆူပူသောင်းကျန်းနေသောအချိန်တွင် နှစ်ဖက် လူအုပ်စုတို့ ကို ချက်ချင်း
ငြိမ်သက်စွာ ထိမ်းသိမ်းရေးမှာ အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့ မှာ မလွယ်ကူချေ ။
ပြသနာပဋိပက္ခကို စတင်ဖန်တီးသူများကြောင့် ကြီးကျယ်သော
ပဋိပက္ခများဖြစ်လာသည် ။ ယင်းပြသနာကြောင့် မြို့ ရွာ အနှံ့ နောက်ဆုံးမှာ
နိုင်ငံတော်အန္တရယ်အထိ ဖြစ်ပွါးလာတတ်သည် ။ သည်အခါ ပြသနာကို အဖြေရှာရာ၌
ဖန်တီးသူကို ဦးစွာမဆန်းစစ်ဘဲ နောက်ဆက်တွဲ ဖန်တီးသူများကို တရားခံအဖြစ်
စွပ်စွဲပြောဆိုကြတတ်ရာ စွပ်စွဲခံရသူများမှာ မခံချိ မခံသာ ဖြစ်ရသည် ။
ယင်းကြားထဲ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ ၊ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများကို မဆီမဆိုင်
ဆွဲထည့်ပြီး ငြိမ်သက်အောင် မပြုလုပ်ရကောင်းလား ပြောဆိုသည်မှာလည်း
သဘာဝမကျလှပေ ။ အပြောကောင်းသော်လည်း တဖက်သူများမှာ ခံရသူများဖြစ်ကြရာ
နာမည်ပျက်ဖြင့် စွပ်စွဲခံရသူများအဖို့ 
သည်းညဉ်းမခံရပ်နိုင်ဖြစ်နေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ ရသည် ။ ပို၍ဆိုးသည်မှာ
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားနိုင်သည် ဆိုသော အစိုးရကို
တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းပြီး ပြောဆိုခြင်းများကား မည်သို့ မျှ မအပ်စပ်ဟု
အကြောင်းမှာ ယခုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် စစ်ရိပ်စစ်ငွေ့ မကင်းသလို
အာဏာပြန်သ်ိမ်းနိုင်သည့်အစိုးရဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေက ဖွင့်ဆိုထားပြီးဖြစ်သည်
။ သို့ သော် ယခုဖြစ်နေသော မိတ္ထိလာမြို့ ပြသနာသည် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်
သွားနိုင်သော အကြောင်းကို ဦးတည်စေမည့် လက္ခဏာများ မတွေ့ ရချေ ၊
အစိုးရကလည်း မည်သူမျှ မိတ္ထိလာမှာ ပြုလုပ်ခိုင်းသည်မဟုတ် ။
နောက်ကြောင်းပြန်လည့်ဖို့ နေနေသာသာ အစိုးရမှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပါဟု ခဏခဏ
ထုတ်ဖေါ် ပြောနေရသေးသည်ကို ကြည့်က သိနိုင်သည် ။ ကျွန်တော် ပြောချင်သည်မှာ
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကာ အစိုးရမှ အာဏာသိမ်းမည်ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ကြောင်း
ပြောသည်မဟုတ် ၊ သူတို့ မှာ ယခုလည်း စစ်ရိပ်စစ်ငွေ့ ဖြင့်
အုပ်ချုပ်နေဆဲပါဟု ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်သည် ။ ယခုအရေးအခင်း ပြသနာသည်
သာမန်အရောင်းအ၀ယ် ကတောက်ကဆမှ မြန်မာလူမျိုးကို စော်ကားသော
မူဆလင်ကုလားလူမျိုးတို့ ၏ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွါးခြင်းဖြစ်သည် ။
၄င်းတို့ ကို မကြေမနပ်ဖြစ်ရာမှ ဈေးဆိုင်များ နေအိမ်များကို
ဖျက်ဆီးကြသည့်အခါ မူဆလင်ကုလား လူမျိုးတို့ က ဗုဒ္ဒဘာသာ ရဟန်းသင်္ဃာတော်
တပါးကို ရက်ရက်စက်စက် ဓါတ်ဆီလောင်း မီးရို့ သတ်ဖြတ်လိုက်ကြသည် ။ ဤသည်မှာ
ငြင်းမရသော အချက်ဖြစ်သည် ။
ယင်းသတင်းကို ကြားသောကြောင့် ပြသနာများမှာ ထိမ်းမနိုင်
သိမ်းမရဖြစ်ကြသောအခါ မိတ္ထိလာမြို့ သည် နောက်ဆုံးမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေ
ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ ရတော့သည် ။ ယခုမူ မိတ္ထိလာမြို့ အခြေအနေသည်
ငြိမ်သက်နေပြီဟု သတင်းများမှာ ကြားသိရသောကြောင့် စိတ်ချမ်းမြေ
့ခံစားရဖြစ်သည် ။ ပဋိပက္ခပြသနာများမှာ ပြီးဆုံးသောအခါ
ပြန်လည်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားပြီး နဂိုရ်မူလအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဋ္ဌါနများမှ ဆောင်ရွက်ကြရတော့ရန်သာဖြစ်သည် ။
ဒုက္ခသည်များအား နေရာချထားရေး ။ ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေး စတာတွေအပြင်
နောက်ထပ်ပဋိပက္ခများ မဖြစ်ပွါးရအောင် တရားဥပဒေ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို
သိရှိနားလည်အောင် ဥပဒေရေးရာ ပညာပေးသင်တန်းများ ပေးအပ်ရန်လိုသည် ။
ဥပဒေဆိုသည်မှာ အစိုးရထုတ်ပြန်ထားသည်ဆိုသော်လည်း ပြည်သူတို့ မှာ
မသိနားမလည်ကြသောကြောင့် ယင်းဥပဒေ၏ ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးကို မည်သူမျှ
မသိရှိကြ၊ မသိရှိကြ၍ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သောအခါ တရားဥပဒေ၏
ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ခံယူရခါမှ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရခြင်းသည်လည်း လက်ခံနိုင်စရာ
မကောင်းလှပေ ။ တနေ့ က လူငယ်နှစ်ဦးမှာ တားမြစ်ထားသောအချိန်ကို ကျော်ပြီး
ပန်းခြံတွင် ညအချိန်မတော် သွားထိုင်မိ၍ ရဲက ဖမ်းဆီးသည် ။ မည်သည့်နေ့ တွင်
ရုံးတက်ရန် လာရမည် ဆိုသော စာရွက်တရွက်ကို ပေးခဲ့ သည် ။ ရုံးချိန်းနေ
့တွင် ရုံးတက်ရသည် ။ ရုံးတွင် နောင်ကို ပန်းခြံတွင်း၌ မထိုင်ရဆိုသည်ကို
ပြောပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်သောအခါ အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ ဥပဒေကို ကျွန်တော်
လေးစားသွားသည် ။ နယူးယောက်မြို့ ၌ နေ့ စဉ်ပြသနေသော ရုပ်မြင်သံကြားတွင်
ငွေချေးမိ၍ မဆပ်နိုင်သောအခါ တရားစွဲဆိုသည် ။ နှစ်ယောက်စလုံးက ရုံးတက်ရသည်
။ တရားသူကြီးက စစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးသည် ။ သို့ အတူ
အိမ်ထောင်ကွာရှင်းမည်ဆိုလျှင်လည်း ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွင် မည်သို
့ကြောင့် ကွာရှင်းရသည်ကို နေ့ စဉ်ပြသနေသည် ။ ဤသည်မှာ အမေရိကန်ပြည်သူတို
့အား တရားဥပဒေမှ မည်သို့ ဖြင့် ဥပဒေပညာပေးများကို ပြည်သူတို့ 
နားလည်အောင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပညာပေးပြသနေခြင်းဖြစ်သည် ။
ကျောင်းဆရာတဦးက ကျောင်းသားတဦးကို ရိုက်မိလျှင် မိဖဖြစ်သူက
ဆရာကို တရားစွဲနိုင်သည် ။ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက အရပ်သားပြည်သူတဦးကို
ရိုက်သည်ဆိုလျှင် တရားစွဲခွင့်ရှိသည် ။ ဥပဒေက တင်းကြပ်ထားရာ မည်သူမျှ
တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်ရဲကြ ။ ယခုမိတ္ထိလာမြို့ မှာ မူဆလင်ကုလား လူမျိုးက
မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုး မိသားစုကို
ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် ရိုက်နှက်ခြင်းမှာ တရားဥပဒေကို မကြောက်ရွံ့၍
ဖြစ်သည် ။ ယင်းသို့ ရိုက်နှက်၍ ရိုက်နှက်ခံရသူကလည်း ရဲထံတရားစွဲဆိုရာ၌
လုံလောက်သော ဥပဒေ၏ အကျိုးခံစားမှုကိုလည်း မရရှိသောကြောင့် ရဲတွင်
တရားစွဲဆိုရန် စိတ်ဆန္ဒမရှိကြ။ ထို့ ကြောင့် ဤကဲ့ သို့ပြသနာများမှာ
နေရာဒေသအသီးသီးတွင် ဖြစ်ပွါးနေခြင်းဖြစ်သည် ။ ယခုပြသနာမှာ
ရဟန်းသင်္ဃာတပါးကို ဓါတ်ဆီလောင်းပြီး ရက်ရက်စက်စက် မီးရှို
့သတ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင်း ကြီးထွားသွားခြင်းဖြစ်သည် ။
၄င်းရဟန်းသင်္ဃာတော်၏ မီးလောင်ကျွမ်းနေသော ကြွင်းကျန်ရစ်သည့်
ရုပ်ကလပ်တော်အနားမှာ မည်သည့် တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် နိုင်ငံချစ်သည့်
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် နိုင်ငံရေးသမားများ ရောက်နေသည်ကို မမြင်ရသေး ။ ဤလူသတ်မှုကား
အလွန်တရာ ကြောက်မက်စရာ ကောင်းသည် ။ နောက် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် လူမျိုးများအဖို့ 
လွန်စွာစိတ်ကို ထိခိုက်စေသည် ။ ၄င်းကျူးလွန်သူများကို တိကျစွာ
ဖေါ်ထုတ်ပေးရန်လိုအပ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ပကတိအဖြစ်အမှန်အတိုင်း
မကြေညာလျှင် နိုင်ငံတကာတွင် မူဆလင်ကုလားတို့ မှ
မီဒီယာလိမ်ညာနေခြင်းများအထဲ အဖြစ်မှန်များ ပျောက်ကွယ်နေရမည်ဖြစ်သည် ။
ယခုအရေးပေါ်ကြေညာချက် ဥပဒေပြဋ္ဌန်း ထုတ်ပြန်ထားပြီ ။
အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပြီးနောက် ပုဒ်မ္မ-၁၄၄- ထုတ်ပြန်ရသည် ။ နောက်မဖြစ်ပွါးရအောင်
ထုတ်ပြန်သောကြောင့် ၄င်းဥပဒေကို မည်သူတစုံတယောက်ကမျှ တိတိကျကျ မသိရှိကြ ၊
ဤပုဒ်မ္မ-၁၄၄-ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုးနေပြီ ။ ရိုးသာ ရိုးနေသော်လည်း
လူ-၅-ဦးထက် ပို၍ မစုရဟုသာ သိရှိပြီး စုလျှင် မည်သို့ မည်ပုံဖြစ်မည်ကို
ဥပဒေပညာပေး သင်တန်းများ ပေးထားခြင်းမရှိကြ ။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့်
စစ်အစိုးရ မဟုတ်တော့ပြီဟု ကြေညာထားရာ ဆန္ဒပြခြင်းများနှင့် မကြာခဏ
ထိပ်တိုက် တွေ့နေတတ်သည် ။ ယခုကဲ့ သို့နယ်မြေဒေသမငြိမ်းချမ်း ဖြစ်ရသော
မိတ္ထိလာမြို့ ကဲ့ သို့ နောက်ထပ်ဖြစ်ပွါးလာလျှင် ဥပဒေကဲ့ သို့ သော
တည်သောအမိန့် များကို ထုတ်ပြန်လာရမည်ဖြစ်သည် ။ သည်အခါ ပုဒ်မ္မ-၁၄၄- ကို
ပုဒ်မ္မ-၁၄၄- ဆိုသည်ကား မည်သည်ကို ဖွင့်ဆိုသနည်း ။ ပုဒ်မ္မ-၁၄၄-
ဆိုသည်မှာ ရုန်းရင်းဆန်ခပ် ပဋိပက္ခ လက်စွဲ စာအုပ်ပါအတိုင်း ပြောရလျှင်
ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအတွက် ပုဒ်မ္မ-၁၄၄- ကို ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည် ။
၄င်းဥပဒေတွင် အကယ်၍ ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် လူအုပ်လူစုက ဆက်လက်
ရှိနေလျှင် ဤဥပဒေကို ကျင့်သုံးရန် ပြဋ္ဌန်းထားသည် ။ အကယ်၍ လူ-၅-ဦးထက်
ကျော်လွန်ပြီး ဆက်လက်ဆန္ဒပြ ရှိနေသည်ဆိုလျှင် ရှေးဦးစွာ မြင်းတပ်ဖြင့်
နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲ ရမည်ဟုဆိုသည် ။ မြင်းတပ်မရှိပါက မျက်ရည်ယိုဗုံးဖြင့်
လူစုခွဲရမည်ဖြစ်သည် ။ မျက်ရည်ယိုဗုံးဖြင့် လူစုခွဲ ၍ မရလျှင် အဆူပူဆုံး
လူအုပ်စုသို့သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ရမည်ဖြစ်သည် ။ ဆန္ဒပြလူအုပ်စုတွင်
အဆူပူဆုံးအုပ်စုနှင့် ရိုးရိုးဆန္ဒပြနေသော အုပ်စုများ ရှိနေတတ်ရာ
ဆူပူနေသော လူအုပ်စုသို့ သာ ပစ်ခတ်စေရန် အမိန့် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းဖြစ်သည် ။
ပစ်ခတ်သည့်အခါတွင်လည်း မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ခတ်ရ ။
မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ခတ်ခြင်းသည် ဆန္ဒပြ လူအုပ်စုအား ပို၍ သွေးကို
ဆူစေတတ်သောကြောင့် ဆူပူနေသော လူအုပ်စုထံ တည့်တည့် ပစ်ခတ်ရန် ဖြစ်သည် ။
ယင်းသို့ပစ်ခတ်ရမည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေပါက ဆေးရုံတွင်
အရေးပေါ်တာဝန်ကျ ဆရာဝန်များ သူနာပြုများကို ချက်ချင်း တာဝန်ယူထားပေးရန်
ဖြစ်သည် ။ သေနတ်ကျည်ဆံမှန်၍ သေဆုံးသော လူများနှင့် ဒဏ်ရာရလူနာများအား
အရေးပေါ်လူနာတင်ကားဖြင့် ချက်ချင်းဆေးရုံသို့ပို့ ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်ဟု
ပုဒ်မ္မ -၁၄၄- တွင် ဖွင့်ဆိုထားသည် ။ ဤသည်မှာ ရဲအရာရှိများအတွက် သီးသန်
့လက်စွဲထုတ်ထားသော ရုန်းရင်းဆန်ခပ် ပဋိပက္ခ လက်စွဲစာအုပ်ပါ
အချက်အလက်များကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ယခုမိတ္ထိလာမြို့ 
အရေးအခင်း ပြီးဆုံးသွားနိုင်လောက်ပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း
နောက်ထပ်မဖြစ်ပွားရအောင် ဥပဒေပညာပေး သင်တန်းများကို
အမြန်ဆုံးပေးရန်လိုအပ်သည် ။ အထူးသဖြင့် ပြသနာတစုံတရာဖြစ်တိုင်း
အစိုးရကို အပြစ်တင် ပုံချရသည်မှာ လွယ်သော်လည်း တကယ်တန်း အစိုးရက ယင်းသို
့ မဟုတ်ခဲ့ လျှင် စွပ်စွဲသူသာ သိက္ခကျသွားနိုင်သည် ။ ယခုအချိန်တွင်
ယခုမိတ္ထိလာအရေးအခင်းသည် သာမန်မှသည် ကြီးကျယ်သော
ပြသနာမီးတောက်များဖြစ်နေသည် ။ မူဆလင်ကုလားတို့ ဖက်မှနေပြီး မီဒီယာတွေ
လိမ်ညာရေးသား နေကြသည်၊ ပုတ်ခပ်ရေးသားနေကြသည် ။ ဆရာတော် အရှင်ဦးဝီရသူကို
မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တချို့ က မူဆလင်ကုလားတို့ နှင့် ပတ်သက်၍
ဝေဖန်တိုက်ခိုက် ပုတ်ခပ်နေကြသည် ။ ဆရာတော်အရှင် ဦးဝီရသူမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာ
သာသနာတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် အမျိုးဘာသာ ချစ်မြတ်ရေးကို တရားဟောနေသူဖြစ်သည် ။
လူမျိုးရေး မုန်းတီးရေးသမားမဟုတ် ၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးရေးသမားမဟုတ်ကြောင်း
မိတ္ထိလာအရေးအခင်းတွင် ပဋိပက္ခအကြား ကြားဝင်ဖြန်ဖြေနေပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ
ရှိစေရေးအတွက် ဆော်သြနေသည်ကိုမြင်၍ သိသာနိုင်သည် ။ ထို့ ကြောင့်
ယခုအချိန်မှာ ဆရတော် အရှင် ဦးဝီရသူကို အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူများအဖို့ 
သိရှိနားလည် သဘောပေါက်သင့်ပြီဟု ထင်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံသား
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်လူမျိုးများ အနေဖြင့် ရခိုင်အရေးအခင်းမှာကော
မိတ္ထိလာအရေးအခင်းမှာပါ စာနာထောက်ထားစွာဖြင့် မူဆလင်ကုလားတို့ ဖက်က လူ
့အခွင့်အရေးသမားတွေလို ပြောကြဆိုကြ ရေးသားနေသေးလိုလျှင်
ယခုယူတူးတွင်-RSO-အဖွဲ့ က မြန်မာအစိုးရအား စစ်ကြေညာနေသော
ရုပ်သံလွှင့်အစီအစဉ်ကို ကြည့်ပြီးမှ စာနာထောက်ထားကြပါလေဟု
ပြောဆိုရတော့မည်ဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ
မည်သည့်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်လူမျိုးကမျှ တနည်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကလည်း
ယခုလို သေနတ်ကို ဘေးမှာချပြီး သေဆုံးသွးခဲ့ ပြီဖြစ်သော အိုစမာဘင်လာဒင်လို
ခြိမ်းခြောက်ပြောနေခြင်းကို မည်သူမျှ မတွေ့ ကြ။ သို့ သော် သေနတ်ပြ၍
ခြိမ်းခြောက်သော ဤယူတူး ရုပ်မြင်သံလွှင့်ခြင်းကိုကား မြန်မာအစိုးရကရော
မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကပါ သတိထား စောင့်ကြည့်ရန်လိုသည် ။ မည်သို
့ဆိုစေ နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်
လုံခြုံရေးကဏ္ဍများကို မည်သို့ ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြင့်
အကြမ်းဖက် မူဆလင်ကုလားတို့ ၏ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများမှာ
လိမ်ညာနေခြင်းများကို ပြန်လည်ချေပထားလိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည် ။
အဓိကအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မီတီသည်၎င်း၊ လူ
့အခွင့်အရေးကော်မီများသည်၎င်း ပြည်သူအများ နားလည်အောင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအခြေစစ် RSO ခေါတောကုလားများအဖွဲ့မှ မြန်မာပြည်အစိုးရနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား ဂျီဟတ်ဘာသာရေးစစ်ပွဲအတွက် တရားဝင်စစ်ကြေငြာလိုက်ခြင်း ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း
ခိုင်ခိုင် | သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၀၂ မိနစ်
(မိထ္ထီလာ အရေးအခင်းအပေါ် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် အင်တာဗျူး)
မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က ရွှေဆိုင်တဆိုင်တွင် အငြင်းပွားရာမှ စတင်၍ အဓိကရုဏ်း တခုအဖြစ် ကျယ်ပြန့်သွားခဲ့ရသည့် မိထ္ထီလာ ရာဇဝတ်မှုကြီးများမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ နောက်တွင် အဆိုးရွားဆုံးသော အဖြစ်အပျက်ကြီးတခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
အုပ်စုဖွဲ့၍ အားနည်းသူကို အနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ်မှုများ၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများဖြင့် အမှောင်လွှမ်းသော မိထ္ထီလာ နေ့ရက်များမှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ရရုံနှင့် မပြီးဘဲ အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် အကြေညာလိုက်သည်အထိ အခြေအနေ ဆိုးရွားခဲ့ရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာ မိထ္ထီလာသို့ အခြေအနေ ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရန် သွားရောက်ခဲ့ကြသူများထဲတွင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များလည်း ပါဝင်သည်။
ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ခဲ့သည့် ကိုမင်းကိုနိုင်အား ၎င်းမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် အခြေအနေနှင့် အလားအလာကို သုံးသပ်ပေးရန် မဇ္ဈိမက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်မှု၊ မတရားမှုများ ကျယ်ပြန့်ကြီးမားလာရပုံနှင့် လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူများ၏ အားနည်းချက်များကို ကိုမင်းကိုနိုင်က ထောက်ပြ အကြံပြုထားပြီး ၎င်းတို့ အတွေ့အကြုံအရ ထိုသို့သော အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိကြောင်း ကြိုတင်စိုးရိမ် တွေးထင်ခဲ့သည်ဟု ကိုမင်းကိုနိုင် က အစချီ ပြောပြထားသည်။
မိတ္ထီလာကို ရောက်ရောက်ချင်း ဘယ်လို အနေအထားတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲ။
မင်း။ ။ ကျနော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း၊ လပိုင်းကတည်းက စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေက မိတ္ထီလာမှာ စဖြစ်တယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိတာ စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ အုပ်စုဖွဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေတော့ ဖြစ်လာတော့မယ်လို့တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ အသက် ၅၀၊ နိုင်ငံရေး အသက် ၂၅၊ ထောင်သက် ၂၀၊ အဲဒီအတွေ့အကြုံက တခုခု ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ ထင်နေခဲ့တာ။ မိထ္ထီလာမှာ စဖြစ်တယ် ဆိုတော့ အတိုင်းအဆကို ကျနော် မေးလိုက်တယ်။ ပြောတာက လိုအပ်နေတယ်၊ အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ညတွင်းချင်း လိုက်သွားတယ်။
မင်း။ ။လူတွေ ပိတ်မိရင် အရေးကြီးတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးက အဓိကပဲ။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ အဆက်အသွယ် ရတယ်။ ကျနော်တို့တွေ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် သွားတွေ့တယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်နဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ လူထုကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပေးဖို့ ပြောတယ်။ သူတို့တွေကလည်း ဖြေရှင်းဖို့ကို တက်တက်ကြွကြွရှိပါတယ်။
လုံခြုံရေးတွေက အထက်အမိန့် မရသေးတဲ့ အတွက် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ရပ်ကြည့်နေတယ် ဆိုတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲ။
မင်း။ ။တခုတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ အမိန့်မရဘဲ လူတွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်မိမယ်၊ ရာဇဝတ်သားကို ဖမ်းလိုက်မယ် ဆိုရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲပေါ့။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း သိဟန် မတူပါဘူး။ ဘယ် ဥပဒေမှလည်း ကျနော်တို့ တိတိကျကျ ပြဋ္ဌာန်းထားတာ မတွေ့ရဘူး။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပုံမျိူး သူတို့တွေရဲ့ အသက်ဟာ အမိန့်နာခံမှု ဖြစ်နေတယ်။ အဲတော့ တချို့ကိစ္စတွေဟာ ရှုတ်ထွေးနက်ရှိုင်းပေမယ့် မျက်စိရှေ့မှာတင် လက်နက်မျိုးစုံ ကိုင်ထားပြီးတော့ လူတယောက်ကို အစစ်ဆေး မေးမြန်းမရှိ ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စ၊ ဥပဒေမဲ့ အိုးအိမ်တွေ ဖျက်ဆီးနေတာကို ဘာမှ အထွေအထူး အမေးအမြန်း လုပ်နေစရာမလိုဘူး။ ကျနော်တို့ လူသားဝါဒအရ ချက်ချင်းလက်ငင်း ကာကွယ်ပေးဖို့ ပါပဲ။ ပြီးတော့မှ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်မှုနဲ့ ကြိုးစင်ကို တက်ဆိုရင်လည်း တက်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အဓိကရုဏ်းအပေါ် ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲ။
မင်း။ ။ သက်သက် ညှာညှာ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော့်ကို အားမရစရာ ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ အပြန်မှာ ဆိုရင် ဓါတ်ဆီဆိုင် တဆိုင်မှာ ကင်ဒိုဓါးကိုင်ပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်တစီးနဲ့ တယောက်ထဲ ရမ်းနေတာကို တွေ့ရတယ်။ အုပ်ချူပ်ရေးပိုင်းက၊ လုံခြုံရေးပိုင်းက လူတွေက ဒီအတိုင်းကို မတ်တပ်ရပ် ကြည့်နေကြတာ။ ဒီပုံအတိုင်းဆို အမိန့်တစုံတရာ စောင့်စရာ မလိုတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေ ဆိုတာဟာ လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ ချိူးဖောက်နေပြီ ဆိုရင် အဲဒီဓါတ်ဆီဆိုင်ကို ကာကွယ်ပေးထားရမယ်။ အဲဒါကို ရဲတွေက ဘာလို့ ဝိုင်းပြီး ကြည့်နေတာလဲ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အမိန့်မရလို့ပြောတယ်။ ကျနော့် သဘောကတော့ အမိန့်မလိုပါဘူး။ အမိန့်မရဘဲနဲ့ ရာဇဝတ်ကောင် တကောင်ကို ဖမ်းလိုက်လို့ အပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်
ကြိုးစင်တက်ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ ဒီလောက် လက်နက်တွေနဲ့ ရမ်းကားနေတာတွေကို မသိလို့လည်း မဟုတ်ဘူး။
အဲဒါတွေက သိပ်သံသယဖြစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ နောက်တခုက တားထားတဲ့ ဒိုင်းတွေ ကြားထဲကနေ တိုးဝှေ့ပြီး ဝင်သွားကြတာတွေ ရှိတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူတွေတုန်းကတော့ ဆက်ဆံပုံက တမျိုး၊ အခုလို ဖျက်ဆီးနေကြတာကျတော့ တမျိူးနဲ့ဗျာ။ စိတ်အပူရဆုံး လို့တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။
ကျနော် ခေါင်းစဉ်ခွဲ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့တွေဟာ ဘဝတွေကို ပေးဆပ်ပြီး သုညဘဝကနေ ပြီးတော့ အစက နေပြန်စရတာ။ အခုကတော့ ဖျက်ဆီးခံရတာတွေနဲ့ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေတယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် မျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ပစ်ဖို့ ဆိုတာမျိုး တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူး။ မရှိခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာ အဲလိုမျိုး လုပ်နေပါတယ်လို့ အစွပ်စွဲခံရပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ နားလည်မှု လွဲနေတယ်။ မဖြစ်သင့်တဲ့ အရာတွေ၊ ဒုက္ခတွေ နောက်ထပ် အကြပ်အတည်း ပေါင်းစုံတွေ ရင်ဆိုင်ရမှာ တွေးပူမိတယ်။ တသက်လုံးမှာ ကျနော်တို့က ဘာသာလူမျိူးပေါင်းစုံနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် တွဲပြီးတော့ နေခဲ့တာပါ။ အဲဒီအစဉ်အလာ ဆိုတဲ့ဟာတွေ ပျောက်သွားပြီးတော့ သံသယတွေနဲ့ တချိန်လုံး
မအေးချမ်းမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေကိုလည်း စိုးရိမ်ရတယ်။ စိုးရိမ်မှုတွေကတော့ ပြောလို့ ကုန်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဝါဒဖြန့်မှုတွေက ဘယ်လောက်အထိ အကျိူး သက်ရောက်မှု ရှိသွားမလဲ။
မင်း။ ။ အထူးသဖြင့် အွန်လိုင်း စာမျက်နှာတွေမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အရာတွေက ရေးတဲ့သူ၊ တင်ထားတဲ့ လူတွေက ကိုယ်လုပ်တဲ့ဟာကို ကိုယ်တာဝန်ယူတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် သူ့ရဲ့ နာမည်နဲ့ မတင်ထားတဲ့ လူတွေက တွေ့အကြောင်း ထိုင်ပြီး မကောင်းပြောမယ်။ ညစ်ညမ်းတာတွေ ရေးမယ်။ အကောင်းဘယ်လောက်ပဲ လုပ်လုပ် မဟုတ်တမ်းတရား စွပ်စွဲမှာပေါ့။ အဲတော့ အွန်လိုင်းမှာ တက်လာတဲ့ သတင်း (သို့) ဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေကို မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ မယုံပါနဲ့၊ ဓါတ်ပုံတွေက အစ လုပ်ကြံလို့ ရနေတာကိုဗျာ။
ကမ္ဘာ့ တနေရာမှာဗျာ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဟာကိုမြန်မာပြည်တနေရာလို့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း ယုတ္ထိရှိအောင် လုပ်လို့ ရနေတယ်။ တတ်နိုင်သမျှကတော့ ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဘယ်လောက်အထိ သက်ရောက်နိုင်လဲ ဆိုတော့ တိုင်းပြည်ပျက်သွားတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့ ဉာဏ်အမြော်အမြင် ရှိမှုနဲ့ တဦးကို တဦးအပြန်အလှန် ထိန်းကြောင်းနိုင်မှုတွေနဲ့ပဲ ဒီကိစ္စကို ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အစိုးရကို ဘယ်လိုအကြံပေးချင်လဲ၊ ဘာတွေလုပ်ဖို့ လိုနေတယ်လို့ ပြောချင်လဲ။
မင်း။ ။ ရဲတွေ၊ လုံထိန်းတွေက အထက်က အမိန့်မပေးရင် ရပ်ကြည့်ဆိုရင်လည်း ကြည့်နေတာပဲ
မနာခံလို့ မရဘူး ။ သူတို့ရှေ့မှာ လက်နက်တွေ ကိုင်ပြီးတော့ သွားလာနေကြတာကို ဘုရားသွားဖို့ ပန်းကလေးတွေ လက်မှာ ကိုင်သွားသလိုပဲ ရပ်ကြည့်နေတာ။ အကုန်လုံး တုံ့နှေးတုံ့နှေးပဲ။ ပွဲဖျက်ပြီးတော့မှ ကယ်တင်ရှင် ဝင်လုပ်မှာလားလို့ တွေးမိတယ်။
မင်း။ ။ အရေးတကြီး လိုအပ်ချက်က ကိုယ့်အိမ် လုံခြုံရေးကို ဂရုစိုက်ကြဖို့။ ဂရုစိုက်တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ သံသယ အခြေခံပြီးတော့ ရန်သူရှာတာမျိူး မဖြစ်စေရဘူး။ ကျနော်တို့ ဈေးထဲမှာ တယောက်နဲ့တယောက် ပုခုံးချင်း တိုက်မိမှာပဲ။ အဲဒီအခါမျိုး ဘယ်ဘာသာဝင်က ဘယ်ဘာသာဝင်ကို တိုက်မိတယ် ဆိုတာမျိူး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ရိုးသားလား ရည်ရွယ်သလား ဆိုတာတော့ သေသေချာချာ ပိုင်းခြားရလိမ့်မယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်မှပဲ သိလိမ့်မယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့ ပျံ့ပြီးတော့ နည်းဗျူဟာက ပြောင်းလဲတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
နောက်တချက်ကတော့ ဝါဒဖြန့်မှုတွေပါ။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်သူက ဘယ်သူကို ဘာတွေ လုပ်သွားလဲ ဆိုတာမျိုး အဲဒါတွေကို သေချာ ဆန်းစစ်ပါ။ တကယ်အကြံအစည် တခုခု ရှိနေတဲ့ လူတွေဟာ အဲဒီနည်းတွေကို သုံးပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ဟာ ဘာမဆို ဆန်းစစ်မှ ရပါမယ်။ ကာကွယ်တာနဲ့ အတူသွားပြီးတော့ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တာကို ခွဲခြားနိုင်ရပါမယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/22/2013 1 အကြံပြုခြင်း
22.03.2013 ( VOA )==========================================
အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လမ်းပေါ်မှာ အကြမ်းဖက် ဆူပူမှုတွေကို မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ ဒေသခံ NLD ပါတီဝင် ဒေါက်တာသိန်းလွင်က ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ကို ပြောပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း အခြေအနေကိုတော့ ဗွီအိုအေ အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ ဦးကျော်ဇံသာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းချိန်မှာ ဒေါက်တာ သိန်းလွင်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့။ လမ်းတွေအားလုံးကို စစ်တပ်က တာဝန်ယူလိုက်ပါပြီ။ စစ်ဥပဒေကြေညာပြီးတော့ ပြဌာန်းလိုက်ပြီ။ စစ်တပ်က အကုန်တာဝန်ယူလိုက်ပြီ။ ညနေ ၆ နာရီကနေ မနက် ၆ နာရီထင်ပါတယ်။ မာရှယ်လော-က။ အဲဒီကာလမှာ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ် နေကြပေတော့-ပဲ။”
“အခု ကျနော်တို့ဆီမှာ ၈ နာရီ ရှိပါပြီ။”
မေး။ ။ --ဆိုတော့ လမ်းပေါ်မှာ လူမရှိတော့ဘူးပေါ့။
“မီးလောင်တာတွေတော့ ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။ ပြီးတော့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတစ်ခုက မွတ်ဆလင်တွေပိုင်တဲ့ စတိုးဆိုင်တွေကို ဖျက်ဆီးပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေ ယူတဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့။ ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်တို့- ရေခဲသေတ္တာတို့-အဲလိုပစ္စည်းတွေကို သယ်ထုတ်နေတယ်။ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သယ်ကြ၊ ကားတွေနဲ့သယ်ကြ၊ သုံးဘီးငှားပြီး လာသယ်တဲ့သူတောင် ရှိသေးတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေက မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။”
“အတော် ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။ အခုတော့ အတော်များများ ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။ ကျနော်တို့ အမှတ် (၁) စခန်းမှာ ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကို ကျနော်တို့ သွားကြည့်ပါတယ်။ ဦးဝင်းထိန်နဲ့ ကျနော်နဲ့ပေါ့။ လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေ ကျနော်တို့ လုပ်ပေးပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆိုရင်လည်း ကလေးတွေက အစာမစားရ-မပြုရဆိုတော့ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှုတွေရော- ဘာတွေရော-ကျနော်တို့ ရှိနေတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တော့ သွားပြီး အကူအညီပေးလို့ မရသေးဘူးပေါ့။ မာရှယ်လောက ၄ နာရီမှာ စပြီးတော့ ထုတ်တာ။ ကျနော်တို့ ခရိုင်ရုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာမှ ဝန်ကြီးချုပ်က ဖတ်ပြတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျနော်တို့ မာရှယ်လော ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အဲဒီတော့ တုတ်၊ ဓား၊ လက်နက်တွေကိုတော့ သိမ်းချင်သိမ်းပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတွေကိုထိန်းတဲ့ ကိစ္စကတော့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ လူတိုင်းက တုတ်၊ ဓား၊ လက်နက် ကိုင်ကြမှာပဲ။ ကိုင်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကိုင်တာပါ။ အဲဒါလေးကိုတော့ ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ စဉ်းစားပြီးတော့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အဲဒါကိုတော့ ကျနော် တောင်းဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။”
ဒေါက်တာသိန်းလွင်ကို ဦးကျော်ဇံသာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။ http://realaudio.rferl.org/voa/BURM/manual/2013/03/22/4811eb42-cd16-4d2c-9431-14dc3d289153.mp3
Mar 22 2013 မိတ္ထီလာမြို့ အရေးပေါ် အခြေအနေ DVB NEWSMar 22, 2013
မိတ္ထီလာမြို့ အပါအဝင် မိတ္ထီလာခရိုင်ထဲက ဝမ်းတွင်း၊ မလှိုင်နဲ့ သာစည်၊ မြို့လေးမြို့ကို အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာပြီး စစ်တပ်က လုံခြုံရေး တာဝန်ယူဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒီကနေ့ အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက် ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA အဖွဲ့သား စိုင်းထွန်းအောင်လွင်က တင်ပြထားပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီလူမျိုး (၈၀) နီးပါးခန့်အား မြိတ်မြို့တွင် ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရမိ
ဓာတ်ပုံ - zaw zaw myeik
ယခင် ပထမအကြိမ် ခိုးဝင်လာသည့် ဘင်္ဂါလီများအား တွေ့ရစဉ်
ဘင်္ဂလာဒေ့်ရှ် နိုင်ငံမှ တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး (၇၈) ဦးအား ပြည်သူများ၏ သတင်းပေးမှု၊ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်(ရေ) ၊ တပ်မတော် (ကြည်း) တို့၏ ပူးပေါင်း ရှာဖွေ ဖမ်းဆီး မှုကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့နေ့ (၁၉) ရက်နေ့များတွင် မြိတ်မြို့နယ် အတွင်း ထပ်မံ ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြိတ်မြို့ စန္ဒ၀တ်ကျေးရွာ အုပ်စု ကွမ်းသီးချောင်းကျေးရွာ အနီး ချောင်းအတွင်း ဘင်္ဂါလီများ အများ အပြား ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းအရ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးရာတွင် ဘင်္ဂါလီ (၅၃) ဦးအား လည်းကောင်း၊ နေ့လည်ပိုင်းတွင် စန္ဒ၀တ်ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲကူးရွာ မြေပေါ် လွန်းကျင်းတွင် ဘင်္ဂါလီ (၁၀) ဦးခန့်အား လည်းကောင်း၊ အခြား နေရာများမှ (၈) ဦး စုစုပေါင်း (၇၁) ဦးအား ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော ဘင်္ဂါလီများအား စစ်ဆေးချက်အရ ဘင်္ဂါလီများ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ခရိုင် မြို့နယ် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများ၊ မြိတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ တပ်မတော် (ကြည်း)၊ တပ်မတော် (ရေ ) ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မြိတ်မြို့နယ်အတွင်း လိုက်လုံ ရှာဖွေ ခဲ့ကြရာ မတ်လ (၁၉) ရက်နေ့ ည (၇) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မြိတ်မြို့ မဇော ကျေးရွာအုပ်စု ရှမ်းထိန်ကျေးရွာ အနီး ချောင်းကမ်းစပ် ဓနိတောများ အတွင်းမှ ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီး (၈) ဦးအား လည်းကောင်း၊ ၄င်းတို့ စီးနင်း အသုံးပြုခဲ့သည့် အလျား (၅၀) ပေ ၊ အနံ (၁၂) ပေ အရွယ်ရှိ သစ်သားလှေ တစ်စီးအား မြင်းကောင်ရေ (၂၅) ကောင် တရုတ်အင်ဂျင်စက် (၂) လုံး တို့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး (၇၈) ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိပြီးနောက် စစ်ဆေးချက်များ အရ ထပ်မံ ကျန်ရှိသေးကြောင်း သတင်းရသဖြင့် တာဝန်ရှိသူများက ရှာဖွေ ဖမ်းဆီး လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့ ကလည်း မြိတ်မြို့သို့ ခိုးဝင် လာသည့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး (၆၅) ဦးခန့်အား ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၄င်းတို့သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှ တဆင့် စစ်တွေမြို့ သက်ကယ်ပြင်
ကျေးရွာနေ ဦးရှော်ဘီထံ အခကြေးငွေ ပေးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် သွားရောက်ရန် စက်လှေဖြင့် ထွက်ခွာလာစဉ် မြိတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ မိတ္ထီလာမြို့ မြင်ကွင်း
"မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဆူပူနေသူများကို ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းဖို့ ပြည်ထဲရေးကခွင့်မပြု"
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ယနေ့ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့အထိ မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဆူပူအကြမ်းဖက်နေတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ပါ လူအုပ်တွေကို ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းဖို့ကို ယခုအချိန်ထိ မိတ္ထီလာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ ယင်းဒေသမှာ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူနေတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက RFA ကို ဒီကနေ့ မနက်က အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။
"သူတို့ကို ဖမ်းလို့မရဘူး၊ပစ်ခတ်လို့မရဘူး။ဘယ်သူမှ ပစ်ခတ်ဖို့ အမိန့်မပေးဘူး။တိတိကျကျ အမိန့်မပေးဘူး"ဟု အဆိုပါရဲအရာရှိက ပြောပါတယ်။
ယမန်နေ့က မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာဇေယျုံနယ်မြေမှာ ဆူပူအကြမ်းဖက်နေတဲ့ လူအုပ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ထိန်းသိမ်းရတာကတော့ နယ်မြေလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အန္တာရာယ်ပြုတဲ့ အတွက် ပစ်ခတ်ထိန်းသိမ်းရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။
ဒီကနေ့ မနက်မှာတော့ မိတ္ထီလာမြို့တွင်းနေရာအနှံ့မှာ မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပြီး မီးငြိမ်းသတ်နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစု နေထိုင်ရာ မင်္ဂလာဇေယျုံနယ်မြေထဲက နေအိမ်၊အဆောက်အဦးတွေ မီးလောင်ကုန်တဲ့အတွက် အဲဒီဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အမှတ်(၁)ရဲစခန်းနဲ့မိတ္ထီလာခရိုင်အားကစားကွင်းမှာ ယာယီနေရာချထားတယ်လို့ မြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့မနက်က မိတ္ထီလာမြို့တွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကြောင့် ဒေသခံလေးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ မိတ္ထီလာမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့က ဆေးရုံက တရားဝင်ရတဲ့ စာရင်းကိုသာ အမှန်အတည်ပြုရတာပါ၊လမ်းပေါ်က စာရင်းကို အတည်ပြုလို့ မရပါဘူး"ဟု ယင်းရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ မိတ္ထီလာမြို့မှာ သုံးရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် လူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ မှတ်တမ်းတွေ အရသိရပါတယ်။ မိတ္ထီလာမြို့မဈေးထဲက ဆိုင်ခန်းတွေကို ဖောက်ထွင်းလာသူတွေကို အထက(၁)နားမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနေတယ်လို့ ယင်းဒေသသို့ ရောက်ရှိနေသည့် RFA သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
"တုတ်ပါတဲ့ တုတ်သိမ်းပြီး ပြန်လွှတ်တယ်။ဓားပါတဲ့သူတွေကိုတော့ ခရိုင်ရဲရုံးကို ခေါ်ပြီး ထိန်းသိမ်းတယ်။အခုတော့ ခရိုင်ရုံးထဲမှာ ၅၀ ကျော်လောက်ရှိပြီ"ဟု ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
မိတ္ထီလာ နံနက်၈း၀၀နာရီ။ ဘုန်းကြီးအပါး၅၀ ခန့်ဓါး၊တုတ်၊လက်နက်များဖြင့် ကန်အနောက်ဘက်သို့ကူးသွား။ ဓါတ်ပုံမရိုက်ရ ၊ဖုန်းမဆက် ရစသည်တို့အော်ဟစ်သွားသည်။ မီးဆက်လက်လောင်နေ။ မိတ္ထီလာ မြို့ ကားဝန်းဝန်းကျင် ပြာပုံအတိဖြစ်။
မိတ္ထီလာ နေ့လည်၁၁နာရီ၃၀ အခြေအနေ ။
တောကြေင်တွေ လက်ခမောင်းခတ်ကုန်ပြီ။တောကြောင်တွေလက်ခမောင်းခတ်ကုန်ပြီ။ စတီစိုးမြင့် ဂိုထောင်ကိုဖောက်ပြီး ရွာသားတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေတိုက်နေပြီ။ မြို့ခံလူထုက မီးရှို့ရင်တော့ရှို့တဲ့ကောင်ကုလားရောဗမာရောမရွေးဘူးအကုန်သတ်မှာလို့ကြိမ်းနေရ။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ကာကွယ်ကို့လမ်းကိုကာကွယ်။ လမ်းတွေပိတ်ထား။လူစုလူဝေးနောက်မလိုက်နဲ့ ကိုယ်လမ်းထဲကို လူစိမ်းလုံးဝအဝင်မခံကြနဲ့။တောကြောင်တွေသတိထားကြ။သူခိုးတွေက ကုလားဗမာ အိမ်မရွေးဘူး။အားလုံးအဆင်သင့်ပြင်ထားကြ။ကာကွယ်ကြ။
ဝမ်းသာစရာသတင်းပါခင်ဗျာ။ဝမ်းသာစရာသတင်းပါခင်ဗျာ။ အခု ၁၀တန်းစာမေးပွဲပြီးပြီးခြင်း လုံခြုံရေးတွေတစ်ကယ်လုပ်ပါပြီခင်ဗျား။ ကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့နေရာမှာ ရဲလုံခြုံရေးတွေအပြည့်နေရာယူထားပါပြီ။ ဒုတ်၊ဓါးလက်နက် အကုန်သိမ်းနေပြီ။ သူများပစ္စည်းခိုးတဲ့သူခိုးတွေကိုအကုန်ဖမ်းနေပါပြီခင်ဗျား။
၂၂၊၃၊၂၀၁၃ နေ့လည် ၁၁း၀၀နာရီ ။
၁။ ချမ်းအေး ရပ်ကွက်အကြီးအကျယ်မီးလောင်နေ။
၂။ နန်းတော်ကုန်းရပ်ကွက် အာရဗီစာသင်ကျောင်းဗလီ ကို မီးရှို့ရန်လာရောက်ကြသော လူအုပ်ကြီးကို ရပ်ကွက် အတွင်းရှိ လူငယ်များကတားဆီးပြီး ရပ်ကွက်ထဲမီးအရှို့မခံနိုင်ပါ ၊ ဒီဗလီကိုမြေပေါ်လုံးဝပြိုကြသွားအောင် တာဝန်ယူဖျက်ပေးပါမယ် ဆိုပြီး ဖျက်ပေးလိုက်၍ မီးအရှို့မခံရပါ။
၃။ ကိုယ့်ရပ်ကွက်အတွင်းမီးအရှို့မခံရအောင် သတိထားပေးနေရပါသည်။
၄။ လူအုပ်ကြီးနဲ့ ဆရာတော်တွေက ကုလားလက်မခံရ။ လက်ခံတဲ့အိမ်ပါဖျက် ဟုကြွေးကြော်နေသည်။
၅။ မိတ္ထီလာအဖြစ်အပျက် ဗီဒီယို ခွေထွက်နေသည်။ သို့သော် ထိုခွေမှာ မရိုးသားပါ။ မြန်မာတွေ ခံနေရသည့် အစပိုင်းနေ့ရက်များထဲမှ သွေးဆူစေသော အပိုင်းများကိုသာ edit လုပ်ထားပါသည်။ ထိုခွေကို ကြည့်ပြီးသွေးမဆူကြပါနဲ့။ ကိုယ်ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူကြပါ။
ယခုမိတ္ထီလာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းအခြေနေမှာ ချီကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းအများအပြားရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့်အခြားလူမှုရေးအသင်းများ။ တစ်ခြားမြို့နယ်များမှ လာရောက်ကူညီကြသော အဖွဲ့အစည်းများ။ မီးသတ်များကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ ပိုပြီးချီးကျူးဂုဏ်ပြုချင်တာကတော့ မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့EPC ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ မီလောင်နေသောနေရာများမှလွှဲ၍ကျန် တစ်မြို့လုံးကို ကြိုးစားပြီးမီးပေးထားပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဗျာ ။အကယ်၍သာတစ်မြို့လုံးမီးဖြတ်ထားရင် မဖြစ်သင့်တာတွေပိုဖြစ်ကုန်မယ်။ ဒါကြောင် EPCရုံးရှိ တာဝန်ရှိသူအရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်
ကိုနေမျိုးဇင်ကို ဒီစာစုကြောင့် နေမျိုးဝေ အလေးပြု
ငါ့ ဘာသာ ကိုထိ ရင် လက်မခံ ဘူးဆိုသူများသို့
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ မြန်မာတွေ ဘုရားရှိခိုးကြတယ်။ မေတ္တာပို့ကြတယ်။ အရပ် ရှစ်မျက်နှာမှာ ရှိတဲ့ သက်ရှိအားလုံးကို ငြိမ်းအေး ချမ်းသာ ကျမ်းမာရွှင်လန်းပါစေကြောင်း ဆုတောင်းတယ်။ အမျှဝေတယ်။
အားလုံး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပါပဲ။ လူမျိုးရေး သွေးနှောဖို့ ၊ စီးပွားရေး ခြေကုပ်တွေ ရဖို့ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ဖို့။ တိုင်းတပါး ပိုင်နက်ကို ဘာသာရေး ဗန်းပြ ကျူးကျော် အခြေချ ဖို့ မြန်မာတွေ ဘယ်သောအခါတုန်းကမှ မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး ။................
ဘာသာရေး အရ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ၀င်ရောက်လာဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တခြား ဘာသာဝင်တွေကို ဆွဲဆောင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါဘူး ။...............
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ လူတို့ စိတ်ထားတွေ အေးချမ်းငြိမ်သက် သိမ်မွေ့တည်ကြည် မွန်မြတ်အောင်ပဲ သူတို့ နေမယ်။ သူတို့ နေပုံ ထိုင်ပုံ အေးချမ်းငြိမ်သက်ပုံ၊ ပူလောင်မှု အနည်းပါးဆုံးနဲ့ လူ့ဘ၀ နေ့ရက်တွေ ဖြတ်သန်းပုံကို နှစ်သက် သဘောကျလို့ သူတို့ ဘာသာကို လေ့လာစူးစမ်းမယ်ဆို သူတို့ကို စံနမူနာအဖြစ် ထားပြီး လာလေ့လာ လာစူးစမ်း လာကျင့်ကြံ လာကူးယူကြည့်နိုင်ကြတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အချင်းချင်း တိတ်ဆိတ်စွာ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ရင်း၊ မောဟ ဒေါသ ဘောဘ နည်းပါးစွာနဲ့ လူပီသသော လူများ အဖြစ် ကိုယ်ကျင့် ဖြောင့်မတ် စာရိတ္တ မြဲမြံ၊ စိတ်ထားမှန်အောင် အတွင်းသဏ္ဍန် ကျင့်ကြံ ဆောက်တည် နေထိုင် ကြသော လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြား စေတနာ ထားတတ်တဲ့ ကတိ သစ္စာ တည်ကြည်သူ မြန်မာ လူမျိုးတွေအဖြစ် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။
မြန်မာ လူမျိုး အများစု ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ သိမ်မွေ့တယ်။ လူဆန်တယ်၊ ငြိမ်းချမ်းတယ်၊ လောဘ ဒေါသကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းသိမ်းတတ်စွမ်းအောင် ဘာသာတရားက သွန်သင်တယ်။
မြတ်စွာဗုဒ္ဓ ဘုရား ( အိန္မ္ဓိယ နိုင်ငံမှာ မွေးဖွါးခဲ့တဲ့ မဟာ လူသား) ဟောကြားခဲ့တဲ့ လူသားချင်း ကူညီစောင့်ရှောက်တတ်လိုမှု ဗြမ္မစိုရ် တရား လူစိတ်များ ကိုသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တည်ဆောက်ကျင့်သုံးကြပါတယ်။
သည်းခံကြတယ်။ ခွင့်လွှတ်ကြတယ်။ ကြေအေးတတ်ကြတယ်။
ရန်လိုမှု အနည်းဆုံးနဲ့ အကြမ်းဖက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်တတ်အောင် နေတတ်ဖို့ အလေ့အကျင့်တွေ မွေးမြူတတ်ကြတယ်။
မွန်မြတ်စိတ်ထားတွေကိုသာ မွေးဖွါးစေတယ်၊ အေးချမ်းစေတယ် ။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကောင်း တယောက် အဖြစ်သာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစု ဟာ တည်ကြည် ငြိမ်သက် အေးချမ်းစွာနဲ့ လူပီသသော လူသားများ အဖြစ် အမုန်းတရားတွေ မပွားပဲ အပြုံးများနဲ့သာ နေတတ် နေနိုင် နေစွမ်းအောင် ကျင့်ကြံကြတယ်။
နေရာတိုင်းမှာ အကောင်းအဆိုး အမှားအမှန် ၊ အဖြူအမဲ ဆိုတဲ့ ကွဲလွဲချက် တို့ အမြဲ ဓွန်တွဲနေတတ်တဲ့ လောက ဓမ္မတာကြောင့် အားလုံးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ ခံယူချက် ကျင့်သုံးနေနိုင်ပြီ လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
ငြိမ်းချမ်းစွာ နေနေတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား တို့ လောကလေး ၊
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်အများစုတို့ စုစည်းနေထိုင်တဲ့ မြို့ပြလေး။
ကျုပ် တို့ နိုင်ငံလေးကို သမိုင်းဆိုးတွေနဲ့ မည်းညစ်အောင်၊
လူမဆန်သော ရက်စက်မှုတွေနဲ့ သွေးစွန်းအောင်
လူသားချင်း သက်ရှိချင်း မစာနာ လည်လှီးတတ်တဲ့ ဓလေ့တွေ သွတ်သွင်း လာမှာ ကျနော်တို့ စိုးရိမ်တယ်။
၊ မယားတွေ အများအပြားယူတဲ့ စရိုက်တွေနဲ့ ထိုးဖေါက်လာပြီး တလင်တမယား စနစ်နဲ့ သာယာချမ်းမြေ့လှတဲ့ မြန်မာ့ လူနေမှုဘ၀ ချစ်စရာ အစဉ်အလာလေးတွေ ပြိုပျက်ယိုင်နဲ့သွားအောင် လုပ်လာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို စိတ်ပူတယ်။
၊ ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်အောင် နောက်ကွယ်က ဘုံကျောင်းတွေ၊ ဗလီတွေ က တဆင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့် ချမ်းသာနေသူတွေ ဒို့ နိုင်ငံမှာ တွင်ကျယ်ကြီးစိုး တန်ခိုးထွား မြန်မာ မ မယားတွေ နဲ့ သားဖေါက်စက်တွေလို မျိုးပွား ကပြားတွေ ပွား လာမှာတော့ ကျနော် တို့ထိတ်လန့်တယ်။ မြန်မာတွေ မျိုးပျောက်သွားမှာကိုတော့ ထိတ်လန့်တယ်။
ကျနော် တို့ နိုင်ငံသားတွေကို လူနေမှု အရာ အလွန်နိမ့်ကျ ဆင်းရဲလွန်းအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ်တခုအောက်က လွန်မြောက်အောင် ရုန်းကန်ဆဲ အခု ကာလမှာ တိုင်းတပါးသား လူမျိုးခြားတို့နဲ့ ဆက်နွယ်ပတ်သက် နေတဲ့ ဘာသာခြား လူမျိုးခြား ခိုးဝင် နယ်ချဲ့လာသူတွေ ကို ကျုပ် တို့က မသိကျိုးကျွံပြုပြီး ပေလျကံ လွှတ်ထားရမှာလား။
ဘယ်သူ သေသေ ငတေမာရင် ပြီးရော ဆိုပြီး လူမျိုးခြား တန်ခိုးထွား သူ၊ ပြည်ပ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ မဟာ စီးပွားရေး ချမ်းသာကြွယ်ဝနေသူ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေကို ငါတို့ မြန်မာတွေက ဒူးထောက်ခစား ကျွန်ခံဆက်ဆံ ရမှာလား ။ အာဖဂန်နစ်စတန် လို၊ မလေးရှားလို၊ မျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်ကွယ် သွားပြီး အစ္စလာမ်ဖြစ်သွားတဲ့ နိုင်ငံတွေအဖြစ် မြန်မာပြည်ကို ဖြစ်ခဲ့စေချင်သလား။
သေချာတာကတော့ မြန်မာ တို့ နိုင်ငံလေးဟာ တကယ့် မဟာ အင်အားကြီး နိုင်ငံ နှစ်ခု ကြားထဲမှ ကျပ်ညပ် တင်းခံ တောင့်ခံနေခဲ့တဲ့ မဟာမြန်မာလူမျိုးတွေ နှစ်ရာထောင်ချီ စုစည်းနေထိုင် သမိုင်း ခိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာတို့ မြေ ၊ မြန်မာတို့ ပြေ ၊ မြန်မာတို့ အခြေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်လူမျိုးချင်း ကျွန်ပြုတာကိုတောင် လက်မခံ တွန်းလှန်မှု တော်လှန်ရေး သမိုင်း နိုင်ငံတကာကတောင် အသိအမှတ်ပြုလေးစားခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံလေးဖြစ်တယ်။
သိသာထင်ရှား၊ လက်ရဲဇက်ရဲစွာနဲ့ လူမျိုးခြား နိုင်ငံခြားသားတို့ က မြန်မာ့မြေပေါ် ကျူးကျော်မှု တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာတို့ သွေး ၊ အေးဆေးနေမယ် မဟုတ်ဘူး။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲ လာတဲ့ ခေတ်အလျင် ခေတ် အကူး ကို စုန်ပြီး လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး နဂိုတည်ပြီး အခြေကျပြီး တည်ငြိမ်သက်ပြီး အစုအရပ်အ၀န်း တွေကို ချိုးဖေါက် ချယ်လှယ် ကျူးကျော်လွှမ်းမို့ဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ တိုင်းတပါးသား လူမျိုးခြား အဆက်အနွယ် သူလျို ဓလံ၊ အကြံစဉ်းလဲ၊ လူ့သရဲ ဆို ဘယ်သူ့ ဘယ်လူမျိုး ကိုမှ မြန်မာတွေက လက်ခံမည် မဟုတ်။
လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ မွန်မြတ်သော ပိုင်နိုင်တိကျစွာ ဖွင့် ဆို ထားပြီးဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့လူသားအများစု အတွက် ရည်ရွယ်ချမှတ်ထားတဲ့ အခွင့်အရေး စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်တွေကို လူမျိုးရေး ဗန်းပြတဲ့ ဟန်ပြအသုံးအဆောင်တွေအဖြစ် လိုသလို ဆွဲယူအသုံးချပြီး ငါတို့ မြန်မာ့မြေကို ပါးနပ်ကျစ်ကောက်စွာ နယ်ချဲ့ ကျူးကျော်လွှမ်းမိုး သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားလာနေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုး ခေတ်သစ် နယ်ချဲ့ နည်းမျိုး ကျင့်သုံးလာသူ ဆိုရင် တရုတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကုလားပဲဖြစ်ဖြစ် လူဖြူ လူမည်း ဘယ် တိုင်းတပါးသား အဆက်အနွယ်ကိုမှ ငါတို့ လက်မခံ ...................... မြန်မာတို့ လက်မခံ။
စင်ကာပူ နိုင်ငံသားတွေ တရုတ်၊ ထိုင်း ၊ စင်ကာပူမှာ မြန်မာတွေ မွေးခဲ့တာ အများကြီးပဲ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရပါရဲ့လား။ ကိုယ်တိုင်သွားလေ့လာကြည့်ကြစေချင်တယ်။
သူ့နိုင်ငံ သူ့လူမျိုး အတွက် သူတို့ တိကျ ခိုင်မာတဲ့ အခွင့်အရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ ကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကို တွေ့ကြရပါတယ်။
အခု ကျနော်တို့ ဆိုလိုနေတာက နယ်စပ်ကနေ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ အကူအညီနဲ့ ခိုးဝင် အခြေချလာပြီး မြန်မာပြည်ကို ဘာသာရေးနဲ့ လွှမ်းမိုးသိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ အစွန်းရောက်မွတ်စလင်တွေ ရှိနေတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေ ဟာ အင်မတန် ကြီးမား သိမ်မွေ့ ရှုပ်ထွေး ပြီး တိုင်းပြည် အနာဂတ် အတွက် အလွန့်အလွန်ကို ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ ကျုးကျော်နယ်ချဲ့မှုဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်တယ်။
ဒါတွေကို သတိကြီးကြီးထား စဉ်းစား ကာကွယ်ကြဖို့ မြန်မာတွေ နိုးကြားသတိရှိစေဖို့ ရိုးသားသော မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ တိုက်တွန်း နိုးဆော်နေတာသာ ဖြစ်တယ်။
ဒီလို ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့ လူမျိုးရေး ကာကွယ်မှု ခံစစ်စည်းတည်ဆောက်ဖို့ မြန်မာတွေက ကြိုးစားနေခြင်း အပေါ် ကျူးကျော် နယ်ချဲ့နေသူတွေ ဘက်ကနေ နာကျည်းပြီး မြန်မာတွေကို ရန်ပြုဖို့ တိုက်ခိုက်ဖို့ စဉ်းစားရင်တော့ ........
( ယခု ပို့စ်ကို ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင့် ရှုတ်ချဖို့ ကွန်မင့် ရေးမယ်ဆိုတဲ့ )
သင်ဟာလည်းပဲ မြန်မာ့ ပိုင်နယ်ကာကွယ်စောင်ရှောက်ရေး မြန်မာ့မြေပေါ် နေပါလျှက် မြန်မာပြည်ဘက် မြန်မာ့ မြေ အတွက် မရပ်တည် မကာကွယ်ပဲ သူခိုး ကို ဓါးရိုးကမ်းသော အတွင်းသစ္စာဖေါက် မြန်မာ့ရန်သူ စာရင်းထဲ ၀င်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အဓိကရုဏ်းတွေ ကို အားပေးစေ့ဆော်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို ခွဲခြားသိမြင်ဖို့ လိုတယ်။ ဥပဒေတွေ ပြတ်ပြတ်သားသား ထုတ်ပြန် ကာကွယ်ရမယ်။ ထိန်းသိမ်းရမယ်၊ ကြပ်မတ်ရမယ်၊ ပြင်ဆင်ရမယ်။ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဘာသာရေး အရေခြုံပြီး စိမ့်ဝင်ထိုးဖေါက်လာတဲ့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး နယ်ချဲ့လက်သစ်တွေ ကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြပ်ကာကွယ်ရမယ် လို့ပဲ ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။
ဒါတွေကို အမျိုးသားရေး အမြင် ခံယူချက်နဲ့ ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေ အားလုံးက ညီညွတ်စွာ စုဝေး ကာကွယ်ရမှာပဲ။ ဒီလို အစွန်းရောက် လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ အာရပ်နိုင်ငံတွေက ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ စီးပွားရေး ခြေကုပ်ကြီးကြီးတွေ ရယူ၊ အာဏာရှိသူတွေကို လက်ကိုင်ဒုတ် အသုံးချပြီး၊ သူတို့ လူမျိုး သူတို့ ဘာသာ ကြီးထွားခိုင်ခန့်လာအောင် နည်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုခဲ့တာတွေ ပြန်လည် စုံစမ်းစီစစ်ဖေါ်ထုတ် အရေးယူဖို့ အရေးတွေ၊
နယ်စပ်ခိုးဝင်သူနဲ့ လေဆိပ်က ဗြောင်ဝင်လာသူတွေကို သွင်းယူလက်ခံခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းဆိုးတွေကို ပြန်လည် ဖေါ်ထုတ် အရေးယူဖို့အရေးတွေ။
လ၀က ထဲက လုံခြုံရေး ဆိုဒ်တွေ အဖွဲ့တွေထဲက အမျိုးဖျက်လောက်ကောင် တချို့ကို ငွေပေးပြီး နိုင်ငံသား အဖြစ် အသွင်ယူ ကျူးကျော်နေလာခဲ့တဲ့ သိန်းချီသော လူမျိုးခြား ကျူးကျော်သူတွေ အတွက် ..........................
ကျနော်တို့က လူ့စည်း .............ဘီလူး စည်း ထားသင့်တာ ထားရမှာပဲ။
ဒါကို လာပြီး ဘာသာရေး အမြင် ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်း လေး တခုထဲနဲ့ ကွက် ပြီး သုံးသပ် ဆုံးဖြတ် အဝေဖန် မစောစေချင်ဘူး။
အစလာမ်ကို ထိရင် လက်မခံဘူး ဆိုတဲ့ လူတွေ ကို လေးနက်စွာ တောင်းပန်ချင်တယ်။ လေးနက်စွာ စဉ်းစားစေချင်တယ်။ လူ့သမိုင်းတွေ အရ ဖြစ်ခဲ့သော သဘော၊ ဖြစ်တတ်သော သဘော၊ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ၊ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနာဂတ်တွေအပေါ်ကို ဘယ်ဘက်ကိုမှ မလိုက်တဲ့ ဘက်မလိုက် သုံးသပ်ချက်တွေ ထုတ်စေချင်တယ် ။
ကိုယ့်ဘာသာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ တန်အောင်နေတဲ့ ဘာသာဝင်တွေ အဖြစ်သာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်မြဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
........................... ဘာသာရေး အသွင်ခြုံ ပြည်ပ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ မြန်မာ့အေးချမ်းတဲ့ မြေကို ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ၀ါးမြိုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ခေတ်သစ်နယ်ချဲ့ကျူးကျော်နည်းကိုသုံးပြီး စိမ့်ဝင်နေခဲ့သူတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ ( အထူးသဖြင့် စစ်အာဏာရှင် ခေတ် နှစ်ငါးဆယ် မျှ အတွင်း စိမ့်ဝင် ထိုးဖေါက် အခြေချ မြုပ်နှံ လုပ်ကြံရန် လာခဲ့သူ) လူမျိုးခြား အနွယ်ဖွါး တွေ ကိုတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဖေါ်ထုတ် အရေးယူရမှာပဲ။
အစိုးရက လုပ်ရ ကိုင်ရ ခက်နေရင် မလုပ်ရဲ မကိုင်ရဲအောင် ဘောညပ် နေမယ် ဆိုရင် လူထုနဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု အားလုံးက အမျိုးသားရေး အမြင်နဲ့ နိုင်ငံကို ကာကွယ်ရမှာပဲ။ ဒါကို ပြည်တွင်းမှာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် နှစ်ပေါင်း ရာချီ နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ မျိုးရိုးဆက်ခံ ခဲ့သူ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့် ကျင့်သုံးသူ မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာသာဝင်တွေက နားလည်ပြီး ကြားမညပ်အောင် နေကြဖို့ လိုပါတယ်။
ကျူးကျော် နယ်ချဲ့လာသူ။ ဘာသာရေး ဗန်းပြပြီး မြန်မာ့မြေ မြန်မာ့ သမီးပျိုတွေကို သွေးနှော ဈေးပေါ အောင် သားဖေါက် စက်သဖွယ် အသုံးချဖို့ ခိုးဝင် အခြေချ စိမ့်ဝင်ထိုးဖေါက်နေတဲ့ အစွန်းရောက် အစလာမ် တွေ သူတို့ရဲ့ မသမာသော ကျူးကျော်နယ်ချဲ့ဖို့ လုပ်ဆောင်နေပုံတွေကို သာမန် ပြည်တွင်းနေ အစလာမ် ဘာသာဝင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံ အချုပ်အခြာ အတွက် အမျိုးသားရေး သတိ လုံခြုံရေး အသွင်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ခွဲခြားသိမြင်ဖို့ လိုတယ်။
မြန်မာတွေ ဘက်က နားလည်ခံစားသိမြင်ပြီး နေတတ်၊ ခံယူတတ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ အစ္စလာမ် ထိ ဓါးကြည့်........... ငါ့သာသာ ထိ ဓါးကြည့် ဆိုလို့ကတော့ မြန်မာတွေ အကြောင်း မသိသေးလို့၊ ( သို့မဟုတ်) မြန်မာ့ မြေအပေါ် ရောက်ရှိအခြေချ လာပြီး နွေးထွေးဧည့်ဝတ်ကျေပွန်တဲ့ မြန်မာတွေ အပေါ်ကို ကျေးဇူး မသိတတ်ရာ ရောက်နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
ထိုနည်းတူပဲ မြန်မာတွေ ဘက်ကလည်းပဲ ထစ်ကနဲရှိသွေးစွန်း သတ်ဖြတ် လက်ရဲ ဇက်ရဲတဲ့ ဥပဒေမဲ့ နည်းတွေ လူရိုင်းတို့ သဏ္ဍာန်တွေနဲ့ မွန်မြတ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ အနှစ်သာရတွေကို ဖျက်ဆီးမပစ်မိဖို့ အချင်းချင်း ထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်တယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းချင်သူတွေ အတွက် ပွဲလန့်ချိန် ဖျာခင်းဖြစ်အောင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဥပဒေမဲ့ လူသတ်၊ ပစ္စည်းလု၊ မြို့ရွာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် မလုပ်မိကြဖို့ မြော်မြင် ဆင်ခြင်တုံ တရားတွေ ရင့်ကျက်မှုတွေ ထားဖို့ လိုတယ်။
မြန်မာတွေ ညီညွတ်ကြဖို့ လိုတယ်။ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လက်ပံတောင်းတောင်ကို အာရုံလွဲမယ့်သူတွေ၊ သူတို့ ကျူးကျော် ခြေရှုပ်ထားသမျှကို ဖုံးကွယ် လက်လွဲဟန်ပြ ရှောင်တိမ်းနိုင်ဖို့ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်အောင် လမ်းပြ၊ အလံရှုးတွေနဲ့ ပုံဖျက်ခင်းကျင်း လမ်းလွဲတတ်ကြတာကိုလည်း မြန်မာ့သမိုင်းအနာဂတ် လှစေချင်သူတို့ အထူး သတိပြုကြစေချင်တယ်။
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်အရ ဘာသာအားလုံးကို လေးစားပါတယ်။ တန်ဖိုးထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာသာရေး ဗန်းပြပြီး လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေ၊ ၊ နယ်နမိတ်၊ ဘာသာရေး ကျူးကျော် နယ်ချဲ့ သိမ်းပိုက်လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားလာသူဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘာသာ မဆို၊ ဘယ်လူမျိုးကိုမဆို၊ ဘယ်လို အဆက်အနွယ်ရှိသူကိုမဆို ပြတ်သားစွာ ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက် ပြီး မြန်မာ့ မြေရေလေပိုင်နက် လွတ်လပ်စွာ တည်ရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ ဂုဏ်ပုဒ် ကို ထိန်းသိမ်းတည်တံ့အောင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး စုစည်းညီညွတ်စွာ ကာကွယ်ရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်မာ သေချာ ပြတ်သား အရှည်မြော်မြင်တဲ့ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်တွေ၊ စည်းကြပ်မှုတွေ၊ စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်မှုတွေ၊ တူးဖေါ်စီစစ်မှုတွေ၊ ပြင်ဆင် လွဲပြောင်းမှုတွေ၊ ကို အားမနာစထမ်း ။ မငဲ့ညှာစတမ်း လုပ်ဆောင်ရမယ့် ခေတ်အကူးအသန်း အချိန် တခုဖြစ်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ခေတ်သစ် နယ်ချဲ့ကျုးကျော်နည်းတွေနဲ့မြန်မာ့မြေ မြန်မာ့ပိုင်နက် အတွင်း နယ်ချဲ့ ကျူးကျော်ခံနေရတာကို မပြောရဲ၊ မပြောတတ်၊ မပြောလိုတဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်းက နောက်ကြောင်းသမိုင်းမရှင်း၊ လာဘ်စားခြင်း ထင်းခဲ့လို့ မပြတ်မသား မလှုပ်မရှား၊ မရဲမရင့်နဲ့ လူမျိုးရေး ထိခိုက်နစ်နာနေမှုတွေ အပေါ် ယုန်နှာစေးနေတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ဇာတ်နဲ့ ကိုယ် မကရဲ မထနိုင်အောင် ဘောညပ်နေတဲ့ တာဝန်ရှိသူ ဆိုသူတွေကိုလည်း ဖေါ်ထုတ် ဖယ်ရှားပြီး လူသစ်၊ ရဲရင့်၊ တက်ကြွ ပြတ်သား အမျိုးစောင့်တရားနဲ့ လူထုအားကိုး ရသူတွေကို နေရာပေးသင့်ပါပြီ။
မြန်မာပြည်တွင်း တရားဝင် နေထိုင် အခြေချ နေထိုင်တဲ့ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာကို မှ မထိခိုက် မနစ်နစ် မဆုံးရှုံးစေလိုပါ။ နဂို နေမြဲ နှစ်ကာလရှည်စွဲမြဲခိုင်မာလာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ခဲ့ခြင်း အစဉ်အလာကို ဆက်လက် စောင့်ထိန်းလိုက်နာစေလိုပါတယ်။
လူမျိုးရေး ဘာသာရေးကို အစွန်းရောက် အမြင်နဲ့ စော်ကားလိုစိတ် ၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံ လိုစိတ် အလျင်း မရှိပါ။
သို့သော် မြန်မာ့မြေ၊ မြန်မာ့ပိုင်နက် နှင့် မြန်မာ့ အနာဂတ် အတွက် ခြိမ်းခြောက်ဖိစီးလာနေသော ကျူးကျော် နယ်ချဲ့ ခံထားရမှု အခြေအနေတွေကိုတော့ ပြတ်သားလေးနက် ခိုင်မာစွာ ဖေါ်ထုတ် အရေးယူ ပြိး မျိုးဆက်သစ်တွေ အနာဂတ် အတွက် ခိုင်မြဲတဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမျိုးတွေ ပေါ်ထွန်းလာစေချင်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
မြန်မာ တိုင်းရင်းသား မြန်မာ့မြေကို ချစ်ခင်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသူ တဦးရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ဒီအတွေးစုကို တွေးမိ ရေးမိပါတယ်။
ဘာသာရေး အစွန်းရောက်သူများ၊ ဒါးခုတ်ရာ လက်လျိုလိုသူများ၊ မသမာမှုနယ်ချဲ့တို့ လက်ဝေခံ ဘ၀နဲ့ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းခဲ့မှုကို ကာကွယ်လိုသူများ ၊ အယူသည်း ငါစွဲပြင်းထန်သူများရဲ့ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချခြင်း ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်း၊ အသက်ထိခိုက်စေနိုင်သည်အထိ ဘေးအန္တရာယ်ပြုခြင်းကို ကြုံဆုံလာရနိုင်တယ် ဆိုတာ သိတယ်။
ဒါပေမယ့် အမျိုး၊ ဘာသာ ၊ သာသနာနဲ့ နိုင်ငံအနာဂတ် အတွက် ငါတို့ မျိုးဆက်တွေ ဆက်လက် အသက်ရှင် ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ဖို့ ငါတို့ ယုံကြည်ချက်တွေ မြဲမြံမှန်ကန် ဖို့ လိုအပ်လာကြောင်း သမိုင်းက စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်ပြီး ပြသလာတာလို့ ယုံကြည်တယ်။
ငါတို့တွေ မြန်မာတို့ တတွေ ရဲရင့်ပြတ်သား ရင့်ကျက် မြော်မြင်ဆင်ခြင်တုံ တရားနဲ့ ဘာသာ ကာကွယ်ရေး ခံစစ်ကြောင်းတွေ လမ်းတွေခင်းရမယ့် အချိန်ဖြစ်တယ်။ ဆူးခြုံတွေ ရှင်းရမယ့် အချိန်ဖြစ်တယ်။ အတားအဆီးတွေ ဖယ်ရမယ့် အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်များကို အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာ ရှင်းလင်းနိုင်ပါစေ။
ခေတ်သစ် နယ်ချဲ့ ကျူးကျော်သူ ဘာသာခြားများ နဲ့ ပြည်တွင်း မှီတင်းနေထိုင်မှု တရားဝင်နိုင်ငံသား ဘာသာကွဲများ အကြား လေးနက်သော လူသား အမြင်နဲ့ ခွဲခြားသိမြင် တုန့်ပြန်ဆက်ဆံနိုင်ကြပါစေ။
ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ခြင်း ဟူသော တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အစဉ်အလာကောင်း တခုကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် တည်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။
မတ်လ ၂၂ ရက် ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ( ရန်ကုန်)
၀န်ကြီးချုပ်တောင်မှ ငါ့ကိုမဖြုတ်ရဲလို့ အသာကြည့်နေရတာ
"မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်စိုး မှ ရပ်ကွက်အစည်းအဝေး တွင် စိန်ခေါ်"
(20-3-2013)နေ့က မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် ရပ်ကွက်အထောက်အကူပြု ဖွံ့ ဖြိုးရေးကော်မတီရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲပြုလုပ်ကျင်ပခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပွဲ သို့ တက်ရောက်လာကြသော မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်နေပြည်သူလူထုများ မုံရွာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဒုဦးစီးမှူး နှင့် ရပ်ကွက်စာရေးမတို့၏ ရှေ့
မှောက်တွင် မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်စိုး မှ စိန်ခေါ်စကား များပြောကြားခဲ့ကြောင်း မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများ ထံမှသိရပါတယ်။
"တင်စိုး ကို အင်တာနက်တင်လိုတင် ဟိုတိုင်ဒီတိုင်လုပ်ကြတဲ့ သူတွေကို တင်စိုးဆိုတဲ့ကောင်က ဂရုမစိုက်ဘူး။၀န်ကြီးချုပ်တောင်မှ ငါ့ကိုမဖြုတ်ရဲလို့ အသာကြည့်နေရတာ။ ဟော့ဒီ မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်ရုံးကို မီးရှို့လို့ရတယ်။ တင်စိုး ဆိုတဲ့ကောင်က အလျှော်ပေးနိုင်တယ်။သိန်းဘယ်နှစ်ထောင်ပေးရ
ပေးရ ပေးနိုင်တယ်။မယုံရင်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ကြ အထုပ်လိုက် အထည်လိုက် ပြမယ်။လောကမှာငွေရှိရင် ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်"ဟု ပြောဆိုခဲ့တယ် အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူက သလ္လာဝတီတိုင်းမ်သို့ ပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။
မုံရွာတောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်စိုးသည် မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် မြေယာ ကိစ္စများတွင် အရှုပ်အရှင်းပြသနာများကို ဖြေရှင်းနေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။
Kyaw Swar Myint shared ThanLarWaddy Times's photo.
ကျွန်တော်က ၀င်ပြောတော့ ပြောတဲ့သူ ရန်လုပ်ခံရတာပဲ(ဦးဝင်းထိန်)
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၂၀ မိနစ်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်က "လက်ရှိအခြေအနေကတော့ မကောင်းသေးပါဘူး။ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ control က သိပ်ပြီး ထိရောက်မှုမရှိဘူး။ ဒီမနက်မှာပဲ သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်က လမ်းမပေါ်မှာ အလောင်းသုံးလောင်းကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ လူအုပ်ကြီးက တစ်ခုခုဖြစ်လို့ ကျွန်တော်က ၀င်ပြောတော့ ပြောတဲ့သူ ရန်လုပ်ခံရတာပဲ။ ဒီကိစ္စကို ထိထိ ရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ပါလို့ သက်ဆိုင်ရာကို ကျွန်တော် ပြောထားပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မိတ္ထီလာတွင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းပိတ်လိုက်သော်လည်း စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် မှာ မပိတ်ပဲ စာမေးပွဲ ဆက်ဖြေရမည် ဖြစ်သည်။
ကြောက်တာ စိတ်ညစ်တာ အိမ်ပြန်ချင်တာ ညလဲ မအိပ်ရဲကြဘူး အဲတာတွေ ကြောင့် စာလည်း ကျက်မရဘူး။ ဟု အဆောင်နေ ကျောင်းသူ တစ်ဦး မှပြောသည်။
"မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဆူပူနေသူများကို ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းရန် အမိန့်မထုတ်သေး"
"ကျွန်တော်တို့က ဆေးရုံက တရားဝင်ရတဲ့ စာရင်းကိုသာ အမှန်အတည်ပြုရတာပါ၊လမ်းပေါ်က စာရင်းကို အတည်ပြုလို့ မရပါဘူး"ဟု ယင်းရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့မှာ သုံးရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် လူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ မှတ်တမ်းတွေ အရသိရပါတယ်။
မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၃
မိထ္တီလာမြို့မှ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို သတင်းရယူနေသော ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းထောက်များ ၏ ကင်မရာများကို အကြမ်းဖက်လူအုပ်စုအချို့က ကင်မရာများ အတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခြင်း၊ ရိုက်နှက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခံနေရပါသည်။
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီအနေဖြင့် မိထ္တီလာမြို့တွင် သွားရောက်သတင်းယူနေသော သတင်းသမား များ၏ လုံခြုံရေးကို အထူးစိုးရိမ်ပြီး သတင်းသမားများအပေါ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးခြင်း များအပေါ် အပြင်းအထန်ရှုတ်ချပါသည်။
အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၊ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် သတင်းမှန်များကို တင်ပြနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေသော သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ လုံခြုံရေးကို အထူးဂရုစိုက်ပေးပါရန်နှင့် သတင်းသမားများအနေဖြင့်လည်း မိမိ၏ လုံခြုံရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို အထူးဂရုပြုကြပါရန် အလေးအနက်ထား တိုက်တွန်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်မှ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကြောညာချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အနေဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်မိပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များ ထပ်မံမဖြစ်ပွားရန်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များမှ ယခုအဖြစ်အပျက်များကို တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် အရေးတကြီး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိတ္ထီလာ ဒေသခံများ အနေဖြင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အခြေအနေများကို သည်းခံပြီး ကျော်လွှားရန် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မိတ်ဆွေများအား လုံး မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် အတွက် စိုးရိမ်ပေးကြသော မိတ်ဆွေများ ကျွန်တော် မနေ့ညက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အိပ်စက်လိုက်ရပါတယ်။နေ့လည်စာ ထမင်းငတ် ညစာထမင်းပဲလှော်ကြော် နဲ့ပဲ ငြားခဲ့ရပါတယ်။အားလုံး ပဲ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျ။ မိတ္ထီလာမြို့ ၏ လက်ရှိအခြေနေမှာ 22 ရက်နေ့တစ်နေ့တည်းအတွင်းတွင် လူဦးရေ 50 နှင့်အ ထက် အသေအပျောက်ရှိပြီး အစ္စလာမ်ဘာဘာဝင်များ နှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များအကြား နယ်မြေအ ကန့်အသတ်ဖြစ်ကာ နေထိုင်လျက်ရှိကြပြီး အပြန်အလှန်မီးရှို့မှုများကြောင့် မြို့ပေါ်ရှိ နေရာ အနှံ တော်တော်များများ မီးလောင်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီး မီးသတ်ကားများဖြင် မီးငြိမ်းသတ်နေကြရ ကြောင်း....မြိ့တွင်း နေထိုင်သူများ နှင့် မြို့ပြင်နေထိုင်သူများမှာ နေအိမ်များကို စွန်ခွါကြာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရသည်။ မီးလောင်ပျက်မှုများတွင် မြို့ပေါ်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဘုရားကျောင်းများ ပျက်ဆီးပြီး မြို့နယ်ပညာ ရေးမှူး ရုံးလည်း မီးသင့်သည့်ထဲတွင် ပါဝင်သွားခဲ့သည်။ ညပိုင်းအချိန်တွင်ရပ်ကွက် အလိုက် လူငယ်များ မှ အ၀င်အထွက်ပေါက်များတွင် ကင်းစောင့်ပြီး အ်ိပ်စက်ကြရကြောင်းသိရသည်။ 22 ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်တွင် ထရတ်ကားများဖြ့င့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ အစ္စလာမ်ဘာသာ ၀င်များအား သယ်ဆောင်ကာ နီးစပ်ရာမြို့များသို့ ပို့ဆောင်ပေးနေကြကြောင်း သိရသည်။ ယနေ့ 23 ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်တွင်းလည်း ပြဿနာများစတင်ဖြစ်ပွားနေပြီး လူ သုံးဦးခန့် သေဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ မီးရှို့ရာတွင်မိမိတို့နေထိုင်ရာ နေရာများကိုပင် ပြန်လည် မီးရှို့နေကြ ကြောင်းသိရသည်။ မိတ္ထီလာမြိ့၏ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေမှာလည်း အတော်ပင် ဆုိးရွားနေကြောင်းပါ။ သတင်း ဓါတ်ပုံ........ စည်သူလွင် (မှတ်ချက်) ဓါတ်ပုံများ တင်ပေးသည်မှာ သတင်းအတွက် သိစေချင်လို့ တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်တော့ မကောင်းပါဘူး အခြားရည်ရွယ်ချက် ဘာမှ မရှိပါ။ ...........................................................
မတ္ထီလာမြို့တွင် လူ ၁၀၀ ကျော် ပိတ်မိနေသဖြင့် ကယ်တင်ရန် လိုအပ်နေဟု ဆို
စနေလင်း| March 22, 2013 |
လက်ရှိအချိန်တွင် မိတ္ထီလာမြို့ ပြည်သာယာ ရပ်ကွက်တွင် အစ္စလမ် ဘာသာဝင် ၁၀၀ ကျော်ကို လူအုပ်စုဖြင့် ၀ိုင်းနေသည့် အတွက် ၎င်းတို့ကို ကယ်တင်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း မိတ္ထီလာမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်က ပြောသည်။ ထို့အပြင် မိတ္ထီလာ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းတွင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ၄၀၀ ကျော်နှင့် ခရိုင် အားကစားကွင်းအတွင်း ၈၀၀ ကျော်ကို လုံးခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များက ကယ်တင် စောင့်ရှောက်ထားရကြောင်း သိရသည်။ “အခုမနက် အခြေအနေ တကယ် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ လှုပ်ရှားတာကို မတွေ့ရဘူး။ သူတို့က ဘာမှ မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်တဲ့ ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုး မရှိတဲ့အတွက် သူတို့ မလုပ်ရဲ မကိုင်ရဲ ဖြစ်နေတာ” ဟု သူက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ယခုကဲ့သို့သော အခြေအနေသည် မိတ္ထီလာမြို့တွင် မဖြစ်ခဲ့ဘူးသောကြောင့် အလွန် စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရကြောင်း၊ လူမျိုးရေး အသွင် ဆောင်လာပြီဖြစ်ကြောင်း ဦးဝင်းထိန်က ဆိုသည်။ ယနေ့ မနက် နောက်ဆုံးအခြေအနေအရ ပေါက်ချောင်း ရပ်ကွက်တွင် နေအိမ်များ မီးရှို့ခံနေရကြောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီး တချို့နှင့် လူတစ်စုတို့က မီးလိုက်လံ ရှို့လျက်ရှိကြောင်း မိတ္ထီလာမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။ ထို့အပြင် မီးလောင်ခံရသော နေအိမ်များတွင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် နေအိမ်များအပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ နေအိမ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ မြို့အနေဖြင့် ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း မိတ္ထီလာမြို့ခံများက ဆိုသည်။ “ရဲတွေအနေနဲ့က မီးလောင်နေတာကို လိုက်ပြီး ငြှိမ်းသတ်နေရတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ တကယ် အကြမ်းဖက်တဲ့ သူတွေကို အရေးယူဖို့ လုပ်နိုင်တာမျိုး မတွေ့ရဘူး။ နောက်ပြီး အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကို ကယ်တင်ထားတဲ့ နေရာကိုပဲ လုံခြုံရေးရအောင် ထိန်းနေရတယ်” ဟု မြို့ထဲသို့ ရောက်ရှိနေသော မိတ္ထီလာမြို့ခံ တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ မီးလောင်မှုများကို မီးသတ်ကား ၁၀ စီးဖြင့် လိုက်လံငြှိမ်းသက်နေကြောင်း၊ မီးလောင်မှုတခုကို လိုက်လံထိန်းသိမ်း နေလျှင် ၎င်းနေရာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် နေရာတခု၌ နောက်ထပ် ထပ်မံ ဖြစ်ပွားလာကြောင်း မိတ္ထီလာခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှ တာဝန်ကျ အရာရှိတဦးက ဆိုသည်။ ယခုအချိန်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်အပါအ၀င်၊ သာသနာရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးများလည်း ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ “အခုချိန်မှာ အားလုံး ရှုပ်ရှက်ခက်နေတယ်ဗျ။ မီးကလည်း ၂ နေရာတောင် လောင်နေတာ။ လုံထိန်းတွေ အင်အားသုံးနေ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြမ်းဖက်တဲ့ လူအုပ်စုကိုတော့ အခုချိန်အထိ ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲတာမျိုး မလုပ်သေးပါဘူး။ နောက်တော့မှ ပြန်ဆက်ပါ” ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မိတ္ထီလာမြို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ မနက် ၈ နာရီကျော်ကတည်းက ပိတ်မိနေတဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းထောက် ၉ ဦးကို လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေက သွားရောက် ခေါ်ထုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီလို့ သတင်းရပါတယ်။
************************* ၁။ ချမ်းအေး ရပ်ကွက်အကြီးအကျယ်မီးလောင်နေ။
ကျွန်တော်က ၀င်ပြောတော့ ပြောတဲ့သူ ရန်လုပ်ခံရတာပဲ(ဦ...